Home Wararka Fadeexada C/risaaq Waaberi oo faraha la gashay dad cusub iyo urur diimeedyo
Fadeexada C/risaaq Waaberi oo faraha la gashay dad cusub iyo urur diimeedyo
CabdirisaaqWaaberi ayaa lagu eedeeyay inuu malaayiin karoon Swedish ah uu musuq maasuqay, lacagtaasoo lagu maalgaliyay ururo siyaasiyeed iyo kuwa Islaamiyiin ah oo ka jira gudaha Soomaaliya. Sida MOL loo xaqiijiyay lacagta uu dhacay Cadirisaaq Waaberi ayaa waxaa loo istcimalaay in lagu baahiyo mabaa’diida urur diimeedka Al Islax oo uu horseed ka yahay Cabdiraxmaan Baadiyow.
Dhaqdhaqaaqa Maaliyadeed ee Cabdirisaaq Waaberi oo baaritaano lagu sameeyey ayaa lagu ogaaday inuu lacag caddaan ah u shubay dad kala duwan oo Soomaaliya jooga. Cabdirisaaq Waaberi ayaa beeniyey inuu lacagtaas lunsaday, wuxuuna eedeymahan ku tilmaamay kuwo ay gadaal ka riixayaan dad dano gaar ah leh.
Dowlada Sweden ayaa ka codsatay dowlada Soomaaliya in ay ku caawiso baritaanka ay ku wado shaqsiyaad Soomaali ah laakiin haysta baasabooro iyo dhalasho wadamo kala duwan.